Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ingiriiska oo la tashi gaar ah la yeeshay Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee KULMIYE iyo Daahir Rayaale oo deg deg loogu yeedhay | Somaliland.Org
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ingiriiska oo la tashi gaar ah la yeeshay Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee KULMIYE iyo Daahir Rayaale oo deg deg loogu yeedhay
February 25, 2009	Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ingiriiska oo la tashi gaar ah la yeeshay Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee KULMIYE iyo Daahir Rayaale oo deg deg loogu yeedhay
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Xisbiga KULMIYE, Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar ayaa looga yeedhay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Britain, waxaanu la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda dawladda Ingiirika u qaabilsan Afrika, Lord Mallach-Brown, si loola yeesho la tashi ku saabsan arrimo khuseeya siyaasadda Somaliland ee wakhtigan xaadirka ah iyo mawqifka xisbiga KULMIYE. Madaxwayne Daahir Rayaale na waxaa si deg deg ah loogu yeedhay inuu London yimaado si uu uga jawaabo dareenka KULMIYE iyo dib udhaca doorashada.
La tashiga KULMIYE iyo yeedhitaanka Daahir Rayaale waxay ka danbaysay warbixin uu xoghayaha arrimha dibadda ee KULMIYE dhawaan uu u gudbiyay dawladda Ingiriiska iyo barlamaankaba oo ka turjumaysay dareenka siyaasadeed ee shacabka Somaliland iyo aragtida xisbiga KULMIYE ee ku wajahan sida uu madaxwayne Daahir Rayaale u maamulayo hawlaha diyaargarowga doorashooyinka madaxwaynaha iyo faragalinta sharciga khilaafsan ee uu ku hayo golayaasha qaranka.
Ujeedada kulankan maantuna waxay ahayd in dawaladda Ingiriisku si qoto dheer ugu kuur gasho dareenka haatan ka taagan Somaliland ee la xidhiidha doorashada madaxwaynaha iyo mawqifka xisbiga KULMIYE oo ah xisbiga mucaaradka ugu wayn.
Arrimaha ay laba geesood kulankan ku lafa gureen waxaa ugu waynaa doorashada madaxwaynaha oo xukuumaddu ay ka shaqaynayso sidii mar kale dib loogu dhigi lahaa. Dr. Maxamed Cabdillahi wuxuu shirkan uu la galay dawladda Ingiriiska ka caddeeyay in haddii doorashadu wakhtigeeda dhici waydo ay masuuliyada dib u dhacaasi leedahay xukuumadda Daahir Rayaale, ee aan eedda dusha laga saari karin Komishinka Doorsshada Qaranka ama hayadaha shisheeye ee Somaliland la shaqeeya. Wuxuu xoghayuhu u sheegay Lord Mallach-Brown in arrinta dib u dhaca doorashadu ay ka turjumayso ujeedo siyaasadeed oo xukuumaddu leedahay, ee aan lagu sifayn karin cilad farsamo.
Dr Maxamed wuxuu sharaxaad ka bixiyay mawqifka xisbigiisu ka qaadanayo arrintan. Wuxuuna sheegay in dawladu ku fashilantay xil-gudashadeedii qabashada doorashada ee ku beegnayd April 2008 kii, markii loo dheereeyay muddo sanad ahna ay haddana muuqato inay ku fashilantay mar labaad in doorashadu wakhtigeedi dhacdo, sidaa awgeed loo baahan yahay in, iyadoo la raacayo distoorka dalka, ay golayaasha qaranku soo dhisaan maamul ka madax banaan xukuuamada oo dalka si ku meel gaadh ah u maamula kaasi oo xilkiisu ugu wayni yahay inuu dalka doorasho ka hirgaliyo.
Xoghayuhu wuxuu u gudbiyay dawladda Britain qorsha xisbigiisi ee ku aadan doorashooyinka iyo arrimaha siyaasiga ah ee ka socda dalka iyo gobolkaba, wuxuuna ugu yeedhay xukuumadda Somaliland in aanay u isticmaalin hantida iyo ciidanka qaranka in lagu cabudhiyo xorriyadda iyo rabitaanka shacabka Soomaliland, haddii ay tasi dhacdana ay waxyeeli karto nabadgalyada dalka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Ingiriiska ee qaabilsan arrimaha Afrika wuxuu shirka ka sheegay in barnaamijka dimuqraadiyada iyo xukunka ku dhisan doorashooyinku ay yihiin guulaha ugu waawayn ee adduunku umadda Somaliland ku ixtiraamo, looguna soo joogsada. Waxaana loo baahan yahay buu yidhi in aan hormarkaasi la dhaawicin.
Doorashoyinka oo la qaban waayaa wakhtigooda ama awooda xukunka dawliga ha la dheeraystaa waxay burburin kartaa horumarka Somaliland gaadhay, ayuu yidhi Lord Mallach-Brown. Waana arrimaha aanu sida wayn ugala hadli doona madaxwaynaha Daahir Rayaale marka uu noo yimaado todobaadka. Lord Mallach- Brown, wuxuu balan qaaday inuu sii wadi doona wadatashiga KULMIYE iyo dawladda Ingiriiska.
Dr. Maxamed Cabdillahi iyo Lord Mallach-Brown waxay kaloo kawada hadleen arrimo la xidhiidha kobcinta xidhiidhka Somaliland la leedahaya Ingiriiska iyo wadamada Afrika, iyo arrimo la xidhiidha dadalka Somaliland ugu jirto sidii ay aqoonsi siyaasadeed u heli lahayd. Wuxuuna Xoghayuhu ka waramay dadaalka xisbigiisa uu ugu jiro aqoonsiga Somaliland.
Kulanka waxaa labada masuul ku weheliyay saraakiil sare oo ka tirsan wasraasradda arrimaha dibadda ee Igiriiska. Kulanka ka dibna, wuxuu xoghayaha arrimaha dibadda ee KULMIYE, Dr. Maxamed Cabdillahi Cumar, uu kulan gaar ah la yeeshay diblomaasiyiin ka tirsan qaybta Afrika ee wasarradda arrimaha dibadda ee Ingirriska oo ku saabsanayd Soomaliland, waxana halkaa lagu waydiiyay su’aalo la xidhiidha hinisayaasha xisbiga KULMIYE ee ku wajahan Somaliland iyo wadamada jaarka la ah.
Kulankani wuxuu ku soo beegbay xilli ay xukuumadda Somaliland doorbidayso in ay doorashada madaxwaynaha dib u dhigto, xisbiga KULMIYE na uu doonayo inaan dib loo dhigin.
Madaxwyne Daahir Rayaale marka uu yimaado London todobaadkan (jimcaha) waxay xukuumadda Ingiriiska oo u matalayo David Miliban iyo Lord Mallach-Brown ay lagali doonaan kulan adag oo lagu waydiin doono su’aalo la xidhiidha doorashada raagtay iyo dareenada ku hareeraysan.
Sanadkii hore, waxaa Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee KULMIYE kulan la tashi ah ugu yeedhay mudanyaal ka tirsan Aqalka Odayaasha ee Baarlamaanka Ingirrika oo uu ka codsaday in Daahir Rayaale loo yeedho.